आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर : चौमासिक राजस्व असुली ८१ प्रतिशत
चितवन (अस) । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा लक्ष्यको ८१ दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयको चौमासिक राजस्व लक्ष्य रू. ६ अर्ब ५ करोड ३९ लाख २४ लाख ७५ हजार रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. ४ अर्ब ९२ करोड ४९ लाख ७ हजार संकलन गरेको छ ।
बन्दाबन्दी हटेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै आगामी महीनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने अनुमान कार्यालयका सूचना अधिकारी कपिल नेपालको छ ।
बन्दाबन्दी हटेपछि कार्याको राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । कार्यालयलाई कात्तिक महीनामा कुल रू. १ अर्ब ४४ करोड ३९ लाख ३ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएकोमा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ८० हजार असुली भएको छ । चालू आवको शुरुआती महीनामा राजस्व संकलन न्यून भए पनि कात्तिकमा लक्ष्य नजिक पुगेको छ । कार्यालयले कात्तिकमा सबैभन्दा बढी राजस्व अन्तःशुल्क शीर्षकमा असुल गरेको छ भने शिक्षा सेवा शुल्क शीर्षकमा राजस्व संकलन शून्य छ ।
अन्तःशुल्क शीर्षकमा रू. १ अर्ब २९ करोड ३० लाख ५ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार उठेको छ । यस्तै मूल्यअभिवृद्धि कर शीर्षकमा ७ करोड ९३ लाख ४३ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १९ करोड ८४ लाख १८ हजार र ब्याजकरमा रू. ३३ लाख ३८ हजार लक्ष्य लिएकोमा ८८ लाख १२ हजार र आयकरमा रू. ६ करोड ६८ लाख ४३ हजार संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ११ करोड १२ लाख २६ हजार असुल भएको छ ।
बहाल करमा कार्यालयले रू. १३ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ लाख ४३ हजार राजस्व असुल गरेको छ भने स्वास्थ्य सेवा कर शीर्षकबाट ६ लाख ६२ हजार कर असुली भएको छ । गतवर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा कर हटाइएकाले बक्यौता मात्र उठेको र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट मुद्रा सटही कर नभएकाले शिक्षा सेवा शुल्क असुल नभएको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी नेपालले कात्तिकमा कर असुली सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘अन्तःशुल्कबाट कर असुली कम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा बढी कर असुल गर्न सफल भएका छौं ।’ बन्दाबन्दीका कारण बक्यौता भएको आयकर, ब्याज कर, मूल्य अभिवृद्धि कर कात्तिकमा जम्मा भएकाले पनि लक्ष्य नजिक पुग्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।